Lasanod:Mudaharaad Galabta ka dhacay | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > ALL DARWIISH NEWS, Somaliland	> Lasanod:Mudaharaad Galabta ka dhacay
Tuesday, March 1, 2011 Laaska News
Lasanod (Laaska News) – Wararka laga helayo caasimadda Gobolka Sool ee Laascaanood ayaa sheegaya in galabta uu magaalada ka dhacay mudaharaad ay dhigeen haweenka Laascaanood,mudaharaadkaas ayaa lagu soo waramayaa in uu laba meelood oo magaalada ah uu ka dhacay.
Ujeedada rasmiga ah ee mudaharaadkan iyo cidda soo abaabushay ayaan la ogayn,waxaase fuliyay haweenkii magaalada, waxaana ka soo baxaya warar kala duwan.
Mudaharaadkan ayaa lagu soo waramayaa inuu ahaa mid ay shacuurtooda ku muujinayaeen Haweenku,diidanaanta xubno ka tirsan Maamulka Somaliland oo dhawaan yimid magaalada,xubnahaas ayaa lagu soo waramayaa inay kasoo jeedaan deegaanka Beesha Sool.
Xubnahaas ka tirsan Maamulka Somaliland ee magaalada yimid ayaa lagu soo waramayaa in ay isu guna jiraan, labada Gole,Wasiiro iyo xubno kale oo maamulkaa ka tirsan.
Wararka ayaa intaa waxay ku darayaan in loo soo diray inay dajiyaan magaalada,waxaase lagala hor yimid buuq,hadalo adag iyo mudaharaad.
Somaliland ayaa dhawaan soo daysay maxaabiistii ay ka qabatay reer Buuhoodle isla markaana aastay Berkadihii Kalshaale ee colaada Kalshaale ka bilaabantay.
Shacabka Gobolka Sool ayaa dhamaantood aad looga dareemay siday uga xumaadeen dagaaladii iyo colaadii Kalshaale ee dhexmaray Somaliland iyo dadka deegaanka Buuhoodle.
Si kastaba ha ahaatee,inkastoo ay magaalada ka wadaan shirar gooni gooni ah haddana waxaa muuqata in xubnahan ka tirsan Somaliland ay magaalada kale kulmi doonaan waji gabax ay keentay Colaadii Kalshaale iyo ololaha ay cayaarayaan taageerayaasha SSC ee magaalada ku sugan oo gabi ahaanba diidan Somaliland,waxaa kaloo raad ku leh dadka taageersan Puntland,waxaa kale oo jira qaar aan intaba raacsanayn oo iyana saamayntooda leh.
Kalshaale: Isku dhac kooban oo shalay galab ka dhacay + DHAGEYSO Somalia:Qodobo xasaasi ah oo ka soo baxay shirkii golaha wasiirada ee maanta